Ihlabathi leAbraxas leeAmulets ® Magic ▷ Talismans ▷ Izikhuseli zomlingo-Iphepha 8
Grimoire of Magic: 80+ imimoya & 466 amandla mantras apha
Ulungelelwaniso lwamandla oMoya
Iithayile zesibingelelo soMoya
Lapel izikhonkwane of Magic
Into eyongezwe kwinqwelo yakho
Kutheni ungasiniki like okanye share?
I-pendant ye-Mammon iza kubuya kungekudala
Eyona nto inamandla yeMali yeMimoya kaMammon
Umoya onamandla uMammon yingcali ekufumaneni ubutyebi kunye nemali. Le amulet iya kukunceda ufumane imali kunye nobutyebi ngokusebenzisa amandla omoya omkhulu uMammon.
IMammon ngumoya ogqibeleleyo ukuba
• Usokola ukufezekisa iinjongo
• Ishishini lakho sele liza kuhla
• Ufuna ukuqala ishishini kodwa awazi ukuba ungayenza njani na okanye ntoni
• Ukhuphiswano lwakho kukususa abathengi bakho
• Ungathanda ukuthatha ishishini lakho ulibeke kwinqanaba elilandelayo
Uziva unqwenela ukushiya ukhuphiswano lwakho ngasemva
Awuyazi indlela yokuqhubela phambili kwimisebenzi yakho
• Imbiza yobusi bemali
Fumana ezakho apha
Imbumbulu entsha: uLusifa uMzisi woKhanya
ULusifa unika kanye igama lakhe elibonisa: Ukukhanya ebumnyameni,
UnguMoya oza kubizwa xa amaxesha amnyama kakhulu kwaye kubonakala ngathi akukho sisombululo.
Igama eliphambili elichaza amandla kaLucifer "Ukubuyisela" amandla akhe anamandla kakhulu kwaye akukho mngeni omkhulu kunalo. Yisebenzise isilumko kuba unganokubuyisa ubukho bakhe.
Amandla kaLucifer adibanisa onke amandla azo zonke ezinye iidaemon Amandla akhe asemhlabeni wonke kwaye angasetyenziselwa yonke into. Uya kufumana amandla akhe angcono xa ubomi bakho bubumnyama kakhulu kwaye awukwazi ukufumana indlela yokuphuma.
Amandla kaLucifer aya kuphakamisa isigqubuthelo kwaye akwenze ubone ngokucacileyo. Basusa uloyiko, umsindo, umona, amathandabuzo, iintloni, imiqobo kwaye bakubonise ngokucacileyo indlela omawuyilandele.
I-Amulet entsha: U-Asmodeus, uKumkani wabangcakazo kunye noLonwabo
Ukuba uthanda ukudlala imidlalo ye-lottery, ikhasino, iLotto, i-EuroMillions, iThunderball, iLotto HotPicks, i-EuroMillions HotPicks, ukuseta uBomi, iLottery kaZwelonke, ii-InstantsPowerBall, iMegaMillions, iSuperEnaLotto, njl. le midlalo.
Njengokumkani wolonwabo kunye nemidlalo uya kukunceda ngalo lonke ixesha xa udlala le midlalo.
Oku akuthethi ukuba uya kuphumelela ngalo lonke ixesha kodwa i-Asmodeus iya kuyonyusa ixesha lakho elikhulu.
I-Asmodeus ikwabonelela ngolonwabo lobomi. Unokufumana nantoni na oyifunayo.
Ungumoya onyanzelisayo kodwa ngokuqalisa amandla akhe, kuya kuba lula ukusebenza naye
I-Astaroth Uthando Olunamandla-ishishini kunye ne-Amulet yomsebenzi
Abahlobo babaluleke kakhulu ebomini bomntu kuba banokukunceda kwiimeko ezininzi xa ungakwazi ukuzinceda. Umhlobo unokukunceda ufumane umsebenzi, wenze ishishini, ufumane uthando lobomi bakho, njalo njalo.
Umhlobo olungileyo ubaluleke kakhulu kwaye iAstaroth yenye yezona mimoya zilungileyo zokukunceda ufumane olu hlobo lwabahlobo.
I-Astaroth ikwangumoya omkhulu wokufumana iimpendulo ezivela kwixesha elidlulileyo, langoku nelizayo.
Ukwenza ube namandla, unyamezele kwaye uzingise.
Ukuba ufuna ukuphucula ubudlelwane bakho, uphucula unxibelelwano nosapho, izihlobo okanye iqabane, fumana abahlobo bokwenene abakuthandayo kunye nokuxhasa? Amagunya eAustaroth anokukunceda.
ENTSHA: Ubutyebi kunye nobutyebi be-amulet ye-Bael yoMoya
Umoya omkhulu uBael yingcaphephe ekufumaneni ubutyebi kunye nobutyebi ngokuyila kwaye uya kukunceda uqhagamshelane ne-chakra yentliziyo yakho.
Ngokwenza oku ufumana unxibelelwano olungcono nesiqu sakho sangaphakathi, ubuchule bakho kunye nabantu abaninzi baxela ukuba banamandla okunyanga xa beqalisiwe kulo moya ungakholelekiyo.
Uninzi lwabaqalayo kumandla kaBael nangona kunjalo basebenzisa amandla akhe ukwenza ubutyebi kunye nobutyebi. Uya kukunceda ufumane iindlela ezinobuchule zokwenza oku.
I-BEELZEBUB yaziwa ngokuba yi-BAALZEBUB, i-ENLIL, i-BEL, "i-PIR BUB" * i-BAAL ZEBUL ne-BEELZEBUTH Ukwaziwa ngokuba yi-Goetic daemon "i-BAEL"
UMarbas ngugqirha omkhulu. Ufuna indlela elumkileyo kodwa ukuba uyavuya, uya kusebenza ngaphandle kokuphumla kuwe.
Unokukunceda ukuguqula ifom ye-astral ibe ziimo ezahlukeneyo.
Emva kokufumana ukuqaliswa kukaMarbas, kuya kuba lula ukusebenza naye.
Ungumoya ogqibeleleyo wabasebenzi bokukhanya, iinkosi zeReiki kunye nabaphilisi
Kukho amaxesha ebomini bethu apho kubonakala ngathi asikwazi ukuqhubela phambili ebomini bethu, ukuphilisa, ukufumana ubuninzi esiyifunayo okanye siziva sivaliwe. Nantoni na esiyenzayo, kuvakala ngathi asenzi nkqubela phambili kwaye sibambekile kwilogo enye.
Akukho nto ikhethekileyo ekufuneka uyenzile ukuze ufumane uMarbas akusebenzele.
Nxiba nje i-amulet. Iintsuku zokuqala ezingama-28 zinqanaba longqamaniso apho amandla eMarbas angqamanisa neyakho. Emva koko unokubiza uMarbas nge-Enn yakhe ekhethekileyo.
ENTSHA: Ukucwangcisa kunye nokuBophelela i-amulet yoMoya wePaimon
UPaimon ngukumkani womoya oguquguqukayo. I-Paimon isetyenziswa kakhulu ekuqondeni ubugqi, ukusukela izinto zokuyila, ukucwangcisa kunye nokubophelela abanye kwiinjongo zakho.
Omnye wemimoya ekufuneka uwusebenzise njengomkhwetha kuba amandla akhe aluncedo kakhulu kwiimeko ezininzi kunye neeprojekthi.
Kukho amaxesha kubomi bethu apho sibonakala ngathi asikwazi ukuhambela phambili ebomini bethu, siphilise, sifumane intabalala esiyifunayo okanye siziva sivaliwe.
Nokuba yintoni na esiyenzayo, kuvakala ngathi asenzi nkqubela phambili kwaye sibambekile kumjikelo ofanayo.
Akukho nto ikhethekileyo ekufuneka uyenzile ukuze ufumane uPaimon ukuba akusebenzele. Nxiba nje i-amulet.
Iintsuku zokuqala ze-28 zisigaba sokuvumelanisa apho amandla e-Paimon adibanisa neyakho. Emva koko unokubiza uPaimon nge-Enn yakhe ekhethekileyo.
Amava omsebenzisi anemimoya eyahlukeneyo
Ezona ziceliweyo zePower Mantras
INGQONDO EVULEKILEYO UKUBA AMAKHOWA OMAKA
INGQONDO EVULEKILEYO YEMICIMBI YEYEZA
UKUNCEDA NGOBUGQWALA BENDALO
UKUNCEDA NGEMIBANDELA UBUGQWALA
UKUNCEDA NGEMIMOYA UBUGqWIrha UKWANDISA ABATHENGI
IIMBONO EZINTSHA ZOSHISHINO
UKWANDISA BRAND ULWAZISO THANGELWA ABATALI
UKWENZA UKUTHANDA UKWENZA UTHANDO LOLAWULO NGESONDO
PHUMZA UMTHANDAZO NGOKWESONDO
UKWENZA AMANDLA OKUZIQINISEKILEYO
VULA AMASANGO OKOMOYA
VULA AMASANGO NGEMVAKALELO
SETHA KWAKHONA KONKE
PHEZULU IZINTO EZINGAPHANDLE
YANDISA UMTHANDAZO NGESONDO YAndise i-LIBIDO
YANDISA AMANDLA ESESONDO THANTSI UTHANDO LOMFAZI LUTANGELA UTHANDO LWENDODA LUKHUTHAZA UTHANDO...
KHUTHAZA INKONZO .....
THANGELELA UMNTU WESINI ESIFANAYO
Zonke iiMantras zamandla apha
Umlingo kunye namandla
Umsebenzi weSigil kunye neMilingo
Iingelosi kunye neengelosi
Uluvo lwakho lubalulekile
Isikhokelo sokugqibela seWiccan
Inkolo yobuBuddha kunye neZenzo
Amakristali, amatye anqabileyo kunye nee-Orgonites
Imivuzo yakho kunye neeKhuphoni
Cela ividiyo yakho yeSiko
Sukuthengisa iinkcukacha zam
ESpain (EUR €)
Afghanistani (AFN ;)
Alibhaniya (ZONKE L)
Aljeriya (DZD د.ج)
Angwila (XCD $)
Armeniya (AMD ngefowuni)
Arubha (AWG ƒ)
Ostreliya (AUD $)
Azerbayijani (AZN ₼)
Bhahamas (BSD $)
Bhangladeshi (BDT ৳)
Bholiviya (BOB Bs.)
Bruneyi (BND $)
Bhulgariya (BGN лв.)
Khambodiya (KHR ៛)
Khameruni (XAF Fr)
Khanada (CAD $)
Kheyip Verde (CVE $)
Iriphabliki yaseAfrika eseMbindini (XAF Fr)
Tshad (XAF Fr)
iTshayina (CNY ¥)
Kholambiya (COP $)
Khomoros (KMF Fr)
ECongo - Brazzaville (XAF Fr)
ECongo - Kinshasa (CDF Fr)
icosta Rica (CRC ₡)
Khroweyishiya (HRK kn)
Dominikha (DKK kr.)
Jibhuti (DJF Fdj)
Dominikha (XCD $)
ilizwe lasedominic (DOP $)
Ekhwithoriyal Gini (XAF Fr)
Yuthophiya (ETB Br)
Gambiya (GMD D)
Guatemale (GTQ Q)
Hangari (HUF Ft)
Ayisilend (ISK kr)
Indiya (INR ₹)
Indoneshiya (IDR Rp)
Sirayeli (ILS ₪)
Jameyikha (JMD $)
Japhan (JPY ¥)
Khenya (KES KSh)
Khirgizstan (KGS som)
iLaos (LAK ₭)
Libhanon (LBP ل.ل)
Layibheriya (LRD $)
IMacao SAR (MOP P)
Maleyishiya (MYR RM)
Maldivs (MVR MVR)
Morishiyasi (MUR ₨)
Mekhsikho (MXN $)
iMoldavia (MDL L)
Mongoliya (MNT ₮)
Morokho (UMAD د.م.)
Mozambikh (MZN MTn)
Namibhiya (NAD $)
Nephal (NPR ₨)
Nyu Zilend (NZD $)
Nikharaguwa (NIO C$)
Nayija (XOF Fr)
Nayijeriya (NGN ₦)
Norowe (NOK kr)
Phakistan (PKR ₨)
Gini eNtsha yasePapuwa (PGK K)
Peru (IPEN S/.)
Filipayinzi (PHP ₱)
Pholend (PLN zł)
Khwatha (QAR ر.ق)
Romaniya (RON Lei)
Rhashiya (RUB ₽)
San Marino (I-EUR)
ISaudi Arabia (SAR ر.س)
Seytshels (SCR ₨)
Singapho (SGD $)
Isiqithi saseSolomon (SBD $)
Mzantsi Afrika (ZAR R)
emaznstie ekorea (KRW ₩)
esri Lanka (LKR ₨)
ESt. Vincent naseGrenadines (XCD $)
Swiden (SEK kr)
Swizalend (CHF CHF)
Thanzaniya (TZS Sh)
Thayilendi (THB ฿)
ikarikuni (ZAMA ₺)
Yukreyini (UAH ₴)
IUnited Arab Emirates (AED د.إ)
iunited Kingdom (GBP £)
eunited States (USD $)
© 2022, World of Amulets https://es.shopify.com
Ukukhetha iziphumo zokukhetho ekuvuseleleni iphepha elipheleleyo.